ဗီဒီယို & တိုက်ရိုက်
10L single high flow oxygen concentrator in stock ယခုရှိသည်
10L single high flow oxygen concentrator in stock now in now ယခုခေတ်တွင် 10L oxygen concentrator မရှိခြင်းသည် ပို၍ ပို၍ လေးနက်လာသည်။ မော်လီကျူးဆန်ခါ၏စုပ်ယူမှုစွမ်းရည်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနိယာမအားဖြင့်ကြီးမားသောနေရာလွတ်မရှိသောအဆီမပါသော compressor ဖြင့်လေ၊ နိုက်ထရိုဂျင် ...ပိုပြီးဖတ်ပါ »
10L အောက်ဆီဂျင်အာရုံခံစက်များယခုရှိသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်နေရာအတော်များများတွင်အောက်ဆီဂျင်စုစည်းစက်များမရှိခြင်းနှင့်မှာယူမှုများသည်တရုတ်စက်ရုံသို့ပိုများလာသည်။ တရုတ်သို့ ၀ ယ်သူပိုများလာသည်နှင့်အမျှတရုတ်အောက်ဆီဂျင်မီးစက်၏ပို့ဆောင်ချိန်သည်ပိုကြာလာသည်။ ယခုအောက်ဆီဂျင်ပေးပို့ရမည့်အချိန် ...ပိုပြီးဖတ်ပါ »
Rajasthan ပြည်နယ် Gangapur တွင်အောက်ဆီဂျင်စုစည်းစက်ပေါက်ကွဲပြီးနောက်အမျိုးသမီးသည်သေဆုံးခဲ့ပြီးသူမ၏ခင်ပွန်းသည်အခြေအနေစိုးရိမ်ရသည်
Gangapur မြို့ရှိစုံတွဲတစ်တွဲ၏ချို့ယွင်းချက်ရှိသောအောက်ဆီဂျင်အာရုံခံစက်ကိုသုံးသောအခါ Rajasthan သည်စက်ဖွင့်သောအခါပေါက်ကွဲခဲ့သောကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ ဇနီးသည်သေဆုံးပြီးမတော်တဆမှု၌ခင်ပွန်းသည်မှာပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ Gangapur Udaimol ခရိုင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ A ...ပိုပြီးဖတ်ပါ »
KN95 နှင့် KN90 မျက်နှာဖုံးကွာခြားချက်ကဘာလဲ။
1. ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်များ Mask KN90 တွင် KN95 ထက်အဆီမပါသောအမှုန်အကာအကွယ်နိမ့်သည်။ 2. ကွဲပြားခြားနားသော filtration ထိရောက်မှု KN90 မျက်နှာဖုံးသည်အမှုန်အမွှား ၉၀% ကျော်ကိုစစ်ထုတ်နိုင်သည်။ KN95 mask သည်အမှုန်အမွှား ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုစစ်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ 3. ကွဲပြားခြားနားသောလေထု permeability ။ နံနက်ခင်း ...ပိုပြီးဖတ်ပါ »
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်အရပ်ဘက်သုံးမျက်နှာဖုံးအချို့၏အကြံပေးချက်များ ၁။ မျက်နှာဖုံးကိုဆေး။ ပြန်သုံးနိုင်သလား။ မရဘူး။ မျက်နှာဖုံးများသည်ယေဘူယျအားဖြင့်အယက်မခံသောအ ၀ တ်များ၊ filter layer + non-woven fabric structure များဖြစ်သည်။ filtration ၏ electrostatic စုပ်ယူနိုင်စွမ်းကိုအားကိုးရန်အလယ်၌ filter fiber ကိုအခြောက်ခံထားရမည်။ပိုပြီးဖတ်ပါ »
မျက်နှာဖုံးများသည်ဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားခြင်းကိုအဘယ်ကြောင့်တားဆီးသနည်း။ အဲဒါကဘယ်လိုပစ္စည်းလဲ။ များသောအားဖြင့်မျက်နှာဖုံးများကိုယက်မထည်များဖြင့်ပြုလုပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောလေ့ရှိသည်။ အယက်မထည်များသည် ဦး တည်သောသို့မဟုတ်ကျပန်းအမျှင်များဖြင့်ပြုလုပ်သောယက်ထည်များနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်မဟုတ်သောယက်မထည်များဖြစ်သည်။ Mask တွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါ ...ပိုပြီးဖတ်ပါ »
၂၀၂၁ တွင် Global Vibrating Net Atomizer စျေးကွက်: CAGR တန်ဖိုးကြီးထွားမှု၏အဓိကမောင်းနှင်အားများ SWOT ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်များ - Philips ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ Omron ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ GF ကျန်းမာရေးထုတ်ကုန်များ ...
တစ်ကမ္ဘာလုံးတုန်ခါနေသော mesh atomizer စျေးကွက်နှင့်ပတ်သက်သောနောက်ဆုံးသုတေသနအစီရင်ခံစာသည်တုန်ခါနေသော mesh atomizer စျေးကွက်၏အဓိကလက္ခဏာများကိုနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချက်အလက်များပေးရန် COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုအကြောင်းစုဆောင်းထားသောသုတေသနများပေးသည်။ ထောက်လှမ်းရေးအစီရင်ခံစာတွင်လက်ရှိမြင်ကွင်းအပေါ် အခြေခံ၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပါ ၀ င်သည်။ပိုပြီးဖတ်ပါ »
No Borders, Inc. မှ MediDent အောင်မြင်စွာစတင်ကြေငြာသည်
ORIENTMED, AZ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၂၁ (ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသတင်းသစ်) - NewMediaWire မှတဆင့် - No Borders, Inc. (OTC: NBDR) သည်ကုမ္ပဏီ၏ MediDent အထောက်အပံ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ဆေးထိုးအပ်နှင့်ဆေးထိုးအပ်လိုင်းကိုအောင်မြင်စွာဖြန့်ချိနိုင်ခဲ့ပြီဟုကြေငြာရန်ဂုဏ်ယူသည်။ အမေရိက၏အမျိုးသားကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းကိုထောက်ခံသည်။ပိုပြီးဖတ်ပါ »
ORIENTMED သည်ဆေးရည်ပြွန် ၁ မီလီလီတာကိုအချိန်တိုအတွင်းပေးပို့နိုင်သည်
တင်ချိန်: ဧပြီ -၁၆-၂၀၂၁
ORIENTMED သည်၎င်း၏ 1ml syringe ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည်နှစ်ဆကျော်ရှိသည်။ ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ဇယားကအတော်လေးပြည့်နေပေမယ့်။ သို့သော် ORIENTMED မှ ၀ ယ်သူသည်အော်ဒါတင်ပြီးပါကတစ်ခါသုံး syr ၁ သန်းကို ၀ ယ်သူအား ဦး စားပေးလိမ့်မည်ဟုကတိပြုသည်။ပိုပြီးဖတ်ပါ »
ORIENTMED သည်၎င်း၏ 1ml luer lock syringe ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကိုပြီးစီးခဲ့သည်
မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ORIENTMED သည်၎င်း၏ 1ml luer lock syringe ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကိုရိုက်သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါ၏လတ်တလောတိုးတက်လာမှုနှင့်အတူကာကွယ်ဆေးများလိုအပ်နေသည်။ ဆေးထိုးအပ်များအထူးသဖြင့်ဆေးထိုးအပ် ၁ မီလီလီတာလိုအပ်သည်။ ဆေးထိုးအပ် ၀ ယ်လိုအားကိုရူးသွပ်စေသောတိုးတက်မှုကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေနှင့် ...ပိုပြီးဖတ်ပါ »
Post တင်ချိန်-ဖေဖော်ဝါရီ -၁၉-၂၀၂၁
တစ်ခါသုံး 1mL အလိုအလျောက်ဖျက်ဆီးဆေးထိုး (ဥာဏ်ရည်တုရောဂါများ) ကိုလိမ္မာပါးနပ်စွာသုံးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆေးသိပ္ပံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရပိုးသတ်ဆေးထိုးကိုကျယ်ပြန့်စွာဆေးခန်းတွင်သုံးသည်။ တစ်ခါသုံးပိုးသတ်ပိုးသတ်ဆေးရည်ကို (အရေပြားစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းအတွက်ကာကွယ်ခြင်းအတွက်) ပုံမှန်သုံးသည်သာမက ...ပိုပြီးဖတ်ပါ »
nano spra gun ၏အခြေခံမူကားအဘယ်နည်း။
Post တင်ချိန်-ဖေဖော်ဝါရီ -၆-၂၀၂၁
nano spra gun ၏အခြေခံမူကားအဘယ်နည်း။ atomization နည်းပညာ၏အဓိပ္ပါယ်မှာ DU ကို ယူ၍ wafer ဟုခေါ်သော ultrasonic transducer ကိုသုံးရန်၊ circuit သည် wafer ကိုမောင်းနှင်သောအခါ wafer သည်တုန်ခါသည်၊ တုန်ခါမှုအထက်မှရေသည်အလွန်သေးငယ်သည့်အမှုန်များထဲသို့ရောက်ရှိသည်။ပိုပြီးဖတ်ပါ »
HEBEI ORIENT IMPORT & EXPORT CO ။ , LTD
ဖုန်း ၀၀၈၆ ၁၃၃၁၅၁၂၅၂၅၆
10L single high flow oxygen concentrator in stock now in now ယခုခေတ်တွင် 10L oxygen concentrator မရှိခြင်းသည် ပို၍ ပို၍ လေးနက်လာသည်။ မော်လီကျူးဆန်ခါ၏စုပ်ယူမှုစွမ်းရည်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနိယာမအားဖြင့်ကြီးမားသောဖယ်ရှားခံရသောဆီမပါသော compressor နှင့်အတူ၊ လေနှင့်အောက်ဆီဂျင်တွင်နိုက်ထရိုဂျင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်အောက်စီဂျင်မြင့်မားခြင်းကိုရရှိစေသည်။ ဤအောက်ဆီဂျင်အမျိုးအစားသည်လျင်မြန်သောအောက်ဆီဂျင်ကိုထုတ်ပေးသည်၊ အောက်ဆီဂျင်စုစည်းမှုမြင့်မားသည်၊ လူအားလုံးအတွက်အောက်ဆီဂျင်အတွက်သင့်တော်သည်။
10L အောက်ဆီဂျင်အာရုံခံစက်များယခုရှိသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်နေရာအတော်များများတွင်အောက်ဆီဂျင်စုစည်းစက်များမရှိခြင်းနှင့်မှာယူမှုများသည်တရုတ်စက်ရုံသို့ပိုများလာသည်။ တရုတ်သို့ ၀ ယ်သူပိုများလာသည်နှင့်အမျှတရုတ်အောက်ဆီဂျင်မီးစက်၏ပို့ဆောင်ချိန်သည်ပိုကြာလာသည်။ ယခုအောက်ဆီဂျင်မီးစက်၏ပေးပို့ချိန်သည် ၁၅-၄၅ ရက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့်အထွက်တိုးခြင်းကိုရရှိသည်။ ယခုလစဉ်အလုံးရေ ၂၇၀ ခန့်ပိုရှိသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါအချက်အလက်များကိုကိုးကားပါ ...
၆၀ မီလီမီတာ Petri ပန်းကန်, Kn95 တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံး, ကိုယ်ဝန်စမ်းသပ်ကိရိယာ, တစ်ခါသုံးလက်အိတ် Nitrile အမှုန့်အခမဲ့, အော်တိုဖိနပ်အဖုံး Dispenser, ဖိနပ်အဖုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာ,
Harper Han ပါ